Dhageyso: Fursado waxbarasho oo loo sameeyay dhalinyarada degmada qansax dheere. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Dhageyso: Fursado waxbarasho oo loo sameeyay dhalinyarada degmada qansax dheere.
Degmada qansax dheere ee gobolka bay waxay kamid tahay degmooyinka dhalinyaradooda heysan fursado ku filan dhanka waxbarashada`shaqooyinka iyo hormarada kale ee aas aaska u ah nolosha.
Dhalinyarada ku nool degmada qansax dheere intooda badan waxay wax kusoo bartaan dalalka sida itoobiya iyo Kenya kadib iyagoo qaarkood dib ugu soo laabtaan duulkooda si ay wax utaraan bulshadooda.
Maxamed Nuur Cabdi Ibraahim waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada qansax dheere xili uu uwaramaayay barnaamijka dhalinyarada raadiyo arlaadi ayaa waxaa uu sheegay in ay ku guleysteen ardadii dib ugu soo laabteen degaanka in ay waxbarashadooda si lacag la`aan ah ay ugu faa`ideyaan dhalinyarada wax barashada u baahan ee kusugan degmada.
Sidoo kale gudoomiye Maxamed Nuur ayaa waxaa uu sheegay ka urur ahaan lacago ay iska aruuriyeen in ay ku fureen iskuul lagu baranaayo kumbiitar si ay markii dhameystaan ardeyda shaqo loogu raadiyo hay`adaha ka howlgalaan degmada qansax dheere.
Dhinaca kale si looga hortago tahriibka iyo in ay galaan fikirada qaldan Maxamed Nuur gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada qansax dheere waxaa uu sheegay in dhalinyarada ay u sameynayaan wacyi galino iyo kulamo joogto ah kuwaasi oo looga hadlo dhibaatooyinka ay leeyihiin tahriib iyo wax yaabaha kale ee ka dhalan karta.
Tabiye: Siid Cali Muuse Ateera.
Previous articleVideo: Magaalada Baydhabo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Koonfur Galbeed, Md. Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)
Next articleSawirro:Guddoomiyeyaasha Labada Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya oo ka qeyb galay kulanka dib u eegista Dastuurka